Supta Kurmasana by Ashtanga Yoga Ki Jai! with David Garrigues
Reblogged 10 months ago from fuckyeahashtangayoga 28 notes Tagged: ashtanga, .
Reblogged 10 months ago from ashtangaillustrations 41 notes Tagged: ashtanga, Pattahbhi Jois, .
Reblogged 10 months ago from alleight 6 notes Tagged: ashtanga, Pattahbhi Jois, .
Reblogged 10 months ago from alleight 11 notes Tagged: ashtanga, Pattahbhi Jois, .